Wararka Maanta: Arbaco, Oct 27, 2021-Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maanta maxkamad la hor geeyay
Hadaba Jamaal Xuseen Axmed Mandela oo ah garyaqaanka Coldoon u doodayay, ayaa habka dacwada loo maamulay sharci daro ku tilmaamay, waraysi uu Mandela BBC Somali siiyay ayuu ku sheegay in markii horena losoo qabtay hab sharciga baal marsan hadana maxkamad la geeyay isagoo aan waxba la ogaysiin.
"Cabdimaalik qaabkii loosoo qabtay waxaanu u aragnaa qaab sharciga baal marsan, marka labaad 60 cisho ayuu xidhanyahay, 7 dii cishaba in la rumaan gareeyo ayay ahayd, taasi may dhicin 60 cisho markii uu xidhnaa uunba iyada oo aan loo sheegin maxkamada la hor keenay, aniga iyo ehelkiisa toona manaan ogayn" ayuu yidhi Mandela.
Mandeela ayaa sheegay in Cabdimaalik iyo isagaba loo sheegay in arrintiisa lagu dhamaynayo hab dhaqan ah, isla markaana anay diyaar ba u ahayn in ay maxkamad ka doodaan, oo maxkamada saaka la horgeeyay ay tahay wax aan hore layskugu ogayn.
"Cabdimaalik markuu 7 cisho xidhnaa war baa soo baxay, waxaa loo sheegay in aan dacwadi jiri doonin oo arrintiisa qaab dhaqan ah oo ilaa heer madaxweyne la gaadhay lagu dhamayn doono, marka waxa naloo sheegay in aanu arrinta cagta u dhigno oo qaab dhaqana ku dhamaan doonto, taasuu Cabdimaalik ku niyad samaa" ayuu yidhi Mandela.
Sida warbaahinta qaarkeed ay qorayso Coldoon ayaa maanta loo sheegay in loo haysto, eedo ay soo gudbiyeen Shabakada dugsiyada Abaarso, khaasatan jaamacadda Barwaaqo ee katirsan shabakadaa, sida uu Mandela sheegayna looma ogolaan in uu maxkamada kahor la kulmo ehelkiisa iyo qareenkiisa.